Sida loo soo dejiyo barnaamijka Arenti?
1. Guji badhanka hoose si aad u gasho Xarunta Soo -dejinta Arenti oo aad kala soo degto barnaamijka Arenti aaladahaaga gacanta.
2. Waxaad u soo dejisan kartaa barnaamijka Arenti ee iPhone -kaaga ama taleefankaaga Android adiga oo ereyga muhiimka ah "Arenti" ka raadsada App Store ama Google Play ama iska baaraya lambarka QR sida hoose.
Sida loo xiro Alexa iyo Arenti?
1. Ku hagaaji shabakadda Arenti App
Samee kamaradda Arenti ama Laxihub oo dhammaystir qaabeynta shabakadda iyadoo la raacayo tilmaamaha ku jira Arenti App
Fiiro gaar ah: Isku day inaad ku magacawdo kamaradaada Arenti App ereyo si fudud lagu garan karo sida “Kaamerada Albaabka Hore”, hana adeegsan jilayaal gaar ah; waxaad tixraaci kartaa buugga isticmaalaha ee shaashadda aaladda Alexa ama boggeeda internetka ee ku habboon liiska luqadaha la taageeray.
2. Samee shaashaddaada aaladda Alexa
(Haddii aad hore u habeysay shaashaddaada aaladda Alexa sida Amazon Echo Show ama Amazon Echo Spot, markaa waad ka boodi kartaa tallaabadan. Tilmaamaha soo socda waxay ku saleysan yihiin Amazon Alexa iOS App)
1. Ku xir qalabkaaga shaashadda Alexa korontada.
2. Ka dooro luqadda shaashadda aaladda, ku xir qalabkaaga shabakad Wi-Fi, geli koontadaada Amazon, ka dibna dhammaystir qaabeynta iyadoo la raacayo tilmaamaha ku yaal Amazon Alexa App.
3. Fur Amazon Alexa App taleefankaaga gacanta. Ku soo gal koontadaada Amazon, ka dibna taabo Aaladaha ku yaal bar -hoosaadka hoostiisa, dooro GROUP (tusaale Qolka fadhiga) meesha aad ku dartay aaladda, waxaadna ku arki doontaa shaashaddaada aaladda Alexa ee GROUP -kan.
Sidee loogu xiraa Kaaliyaha Google Arenti?
Fiiro gaar ah:Isku day inaad ku magacawdo kamaradaada Arenti App ereyo si fudud lagu garan karo sida “Kaamerada Albaabka Hore”, hana adeegsan jilayaal gaar ah; waxaad tixraaci kartaa buuga isticmaalaha ee kaaliyaha isku -dhafan ee Kaaliyaha Google ama boggiisa ku habboon liiska luqadaha la taageeray.
2. Samee aaladda Google Home
(Haddii aad hore u habaysay aaladda isku -dhafan ee Kaaliyaha Google sida af -hayaha Google Home ama Google Nest Hub, markaa waad ka boodi kartaa tallaabadan. Tilmaamaha soo socda waxay ku saleysan yihiin Google Home App App)
1. Hubi in aaladdaada Kaaliyaha Google uu shaqeynayo kuna xiran yahay shabakad Wi-Fi.
2. Fur Google Home App -ka taleefankaaga gacanta, ku dhufo Bilow dhinaca midigta hoose oo gal Koontadaada Google, ka dibna ku dheji “Bilow” badhtanka shaashadda taleefankaaga gacanta.
Telefoonku ma heli karo farriinta riixitaanka qaylo -dhaanta?
Waxaad u baahan tahay inaad awood u yeelato oggolaanshaha riixitaanka ee barnaamijka "Arenti" si aad u hesho farriimaha riixitaanka si caadi ah. Markaad soo dejiso barnaamijka oo aad gasho markii ugu horraysay, daaqad soo baxaysa ayaa kuu soo jeedin doonta inaad oggolaanshaha oggolaato. Haddii aad dooratid inaad damiso, waxaad u baahan tahay inaad gasho nidaamka nidaamka taleefanka-ogeysiisyada-hel "Arenti" oo aad oggolaato oggolaanshaha ogeysiiska.
Ma heli karaa ogeysiisyada taleefankayga?
Fadlan xaqiiji in App -ku uu ku shaqeynayay taleefanka, oo shaqadii xusuusta ee la xiriirtay la furay; ogeysiiska farriinta iyo xaqiijinta maamulka nidaamka taleefanka gacanta ayaa la furay.
Sidee dib loogu hagaajiyaa aaladda ku jirta barnaamijka?
Haddii aad rabto inaad ka tirtirto aaladda app -ka oo aad mar kale ku darto, kaliya samee sida soo socota:
1-Guji kaamerada ku taal bogga “Camera” si aad u gasho bogga “Settings”.
2-Waxaa jira badhanka "Delete" xagga hoose.
3-Guji si aad uga saarto aaladda akoonka.
Immisa qof ayaa isla markiiba geli kara koonto?
Koonto waxaa lagu gali karaa oo kaliya hal moobil iyo hal kombiyuutar isla mar, dadka kale waxay kaamirada ka daawan karaan oo kaliya habka wax wadaagga.
Isku hagaaji dareenka?
Waxaad dooran kartaa inaad awood u yeelatid ogaanshaha dhaqdhaqaaqa/qaylo-dhaanta dhawaaqa iyada oo loo marayo Settings-Alarm Settings, oo dooro xasaasiyad hoose/dhexe/sare.
Beddel duubista SD/duubista daruuraha?
Ku saabsan su'aashaada, jawaabaha waa sida soo socota:
Guji kaamerada aad rabto inaad ku daawato bogga guriga si aad u gasho bogga horudhaca, guji taariikhda hoose si aad u dooratid kaarka SD/dib -u -ciyaarista daruurta.
Guji badhanka hoose, oo si toos ah uga soo dejiso Arenti App.
Ama waxaad u soo dejisan kartaa barnaamijka Arenti ee iPhone -kaaga ama taleefankaaga Android adiga oo ereyga muhiimka ah "Arenti" ka raadsada App Store ama Google Play ama iska baaraya lambarka QR sida hoose.
Waxaad u baahan tahay inaad awood u yeelato oggolaanshaha riixitaanka ee barnaamijka "cloudedge" si aad u hesho farriimaha riixitaanka si caadi ah. Markaad soo dejiso barnaamijka oo aad gasho markii ugu horraysay, daaqad soo baxaysa ayaa kuu soo jeedin doonta inaad oggolaanshaha oggolaato. Haddii aad dooratid inaad damiso, waxaad u baahan tahay inaad gasho dejinta nidaamka taleefanka-ogeysiisyada-hel "cloudedge" oo aad oggolaato oggolaanshaha ogeysiiska.